Igbo girls: Ihe ndị ị kwesịrị ịma maka ụmụnwaanyị Igbo - BBC News Ìgbò
Igbo girls: Ihe ndị ị kwesịrị ịma maka ụmụnwaanyị Igbo
Ebe foto si, Arunma Oteh, Chimamanda Adichie, Oby Ezekwesili
Ala Igbo nwere ọtụtụ ụmụnwaanyị meterela ihe e ji echeta ha ma na Naịjirịa ma n'ụwa gbaa gburugburu
Nwaanyị dị, nwaanyị adịkwa mana ọtụtụ ndị ga-ekwenyere gị ma ị kwuo na uru dị n'ịlụ nwaanyị Igbo.
N'agbanyeghị na ọtụtụ ndị na-ekwu na ịlụ nwaanyị Igbo kachasị ada ọnụ, ọtụtụ ndị ga-agwa gị na uru dị n'ịlụ nwaafọ Igbo.
Ọtụtụ ụmụnwaanyị Igbo na-abụ ngọzị, ha anaghị abụ ọgbatuhie nye di ha na ezinaụlọ ha.
Ụmụnwaanyị Abia state aha ha na-ada ụda na Nigeria
Kedụ ndị bụ "Ụmụada" n'ala Igbo?
Ụgwọ isi nwaanyị ọ dị mkpa taa?
Uru dị na nwaanyị Igbo
Ha na-agbasi mbọ ike: Ha na-akwụrụ n'onwe ha, nke bụ ihe ndị bekee na-akpọ 'independent'. Ị chọrọ ịma ma nke a ọ bụ eziokwu, lee nwaanyị di ya nwụrụ. Ọtụtụ n'ime ha anaghị alụgharị di ọzọ, mana ha ga-agba mbọ hụ na ha lekọtara ezinaụlọ ha, ma zulite ụmụ ha. Nwaanyị Igbo adịghị umengwụ. Ha na-agbasi mbọ ike n'agbanyeghị ụdịrị ego di ha nwere. Ha anaghị achọ ịwụsa ahụ ma chere ka di ha zụọ ha nri. Ha na-achọ inwe ikike ịkpata nri ma n'ụlọ di ya ma n'ezinaụlọ nna ya. Ọtụtụ na-azụ ahịa, ndị ọzọ na-akọ ugbo, na-arụ ọrụ bekee nakwa ọrụ aka ndị ọzọ. Onye ọbụla ị jụrụ ajụjụ a ga-agwa gị na ụmụnwaanyị Igbo na-agbalị nke ukwuu. Ha na-agba mbọ inwe ọrụ aka, maka na ha kwenyere na ọ bụghị naanị nwoke na-azụ ezinaụlọ. Igbo na-asị na 'nwoke na-akọ ji nwaanyị a na-akọ ede'.
Ha na-ama ihe na-adịkwa ọcha: Nwaanyị Igbo na-ama ihe ọfụma, ma n'akwụkwọ ma ebe ndị ọzọ ekwesịrị ka ụbụrụ gị rụọ ọrụ ọfụma. Ha na-ama etu ha ga-esi eso ndị agbataobi ha nakwa ndị ezinaụlọ di ha, iji kpuchie ha ma na mma ma na njọ. Ha na-adị ezigbo ọcha. Ha ga-edozi ụlọ gị ọcha oge niile, ma hụ na uwe gị na ihe ndị ọzọ dị ọcha, ha anaghị eru inyi
Ụmụnwaanyị Imo state bụ "a kwaa a kwụrụ" na Nigeria
Ụmụnwaanyị Ebonyi state Nigeria enweghi ike ichefu aha ha
Ha na-ama mma: Ụmụ nwaanyị Igbo na-ama mma, ha na-abụkarị 'ọcha ka ọ maka', nke mere na oti egwu Flavour anaghị akwụsị itu ha aha dịka 'ugegbe oyibo', 'adanma', 'asanwa', 'nwata makata mma'. Aha ndị Igbo na-akpọkarị ụmụnwaanyị ha nke na-egosi mma ha bụ 'adaugo, akwaugo, mmasinachi, Amaka. Ụfọdụ na-etu ha aha dịka "ọ ma ụma asa ahụ, nwa chukwu kwọchara aka kee, tomato Jọs, achalugo, nwa ọma, enenebe ejeghị ọrụ, apụnanwụ."
Obodo kachasị adaọnụ n'ịlụ nnwayị n'ala Igbo
Ị ga-eri ezigbo nri: Ha na-ama esi nri ọfụma. BBC Igbo jụrụ ụfọdụ ndị ala ọzọ ihe kpatara ha jiri lụọ nwaanyị Igbo, ha kwuru na ọ bụ ịma nri esi ka ha jiri nweta ha. Ọtụtụ kwuru na Igbo nwere nri dị iche iche, ihe o ji amasị ha bụ na nwunye ha sichaa ya, ha erie ya ma rachaa aka ha. Ị chee na nke a bụ asị, jụọ otiegwu Davido ka ọ kọwaara gị ihe mere o ji ekwu ihe ọma maka enyi ya nwaanyị Chioma bụ osinri (chef). Isiri gị nri ga na-amasị ya oge ọbụla, o nwere ike ịkwụsị gị iri nri n'iro.
Ha ma akwanye ugwu: Ha na-erubere di ha isi. Ha na-adị obi umeala. Mgbe gboo, ọnọdụ nwaanyị Igbo na be di ya bụ naanị ka a na-ahụ ya anya hapụ ịnụ olu ya, mana ugbua, a na-anụ olu ya, mana ọ bụ naanị ebe o ji ya akwado di ya na ezinaụlọ ya. Ha anaghị agbakarị n'ezi maka na ha achọghị ihe ga-ebute ihere nye di ha na ezinaụlọ ha.
Ha ga-eme ka ụmụ gị bụrụ ọpụrụiche: Onye ga-azụrụ gị ụmụ gị n'ụzọ pụrụ iche? Nwaanyị Igbo ga-azụ ụmụ gị ọfụma, kuziere ha nsọpụrụ, ịgba mbọ nakwa nke kachasị nke kuziere ha etu esi asụ asụsụ Igbo nakwa ịkwado omenaala igbo na uru dị n'ịbụ onye Igbo ọfụma.
Ebe foto si, Mazi Nwonwu
Ụmụnwaanyị Igbo na-akwadosi di ha ike na-atụghị ụjọ ihe ọbụla.
Ha ga-ahụ gị n'anya nke ukwuu: Nwaanyị Igbo hụrụ gị n'anya agaghị eji gị egwu egwu. Ọ ga-eji ịhụnanya nyejuo gị afọ. Ọ ga-ewe gị dịka eze ya, fee gị ma mee ka ụwa niile mara na ị bụ onyeisi obi ya na ezinaụlọ ya.
Ha bụ ezi nwaanyị: Ọtụtụ ụmụnwaanyị Igbo na-abụ odoziakụ na-abụghị oriakụ di ha. Ha na-agba mbọ ilekọta akụnaụba di ha n'ụzọ pụrụ iche. Ha anaghị ekwe ka di ha mefuo ego n'ihe na-abaghị uru ọbụla. Ha na-akwado di ha ka o nwee ike tinye ego n'ihe achụmntaego nke bekee kpọrọ investment, maka ọganiihu na ọdịmma ezinaụlọ.
Onye lụtara nwaanyị Igbo dị mma lụtara ezigbote ihe
Ezinaụlọ 'unu' ga-abụ nke ya: Nwaanyị Igbo kweta ịlụ gị, o kwetala ịlụ ezinaụlọ gị. Nke a pụtara na ọ ga-ewere ezinaụlọ gị mere nke ya, nke bụ na etu o na-esi akpasara ezinaụlọ nke ya agwa ka ọ ga-esi akpasara nke gị. Ọ ga-agba mbọ ịlekọta ma ezinaụlọ gị ma ezinaụlọ ya. Onye si n'ezi agaghị ama na ọ bụghị otu nne mụrụ unu.
Ụmụnwaanyị Igbo na-abụ ezigbo nne na nwunye. Ihe ndị a a ga-eme ka ị lụọ nwaanyị Igbo?
Vidio, Ọ bụ n'Imo, Delta, Anambra, Enugu, Abịa maọbụ n'Ebonyi ka ịlụ nnwayị kachasị adaọnụ?, Duration 2,10
Vidio, Ụmụnwaanyị Igbo na-agwa anyị ịhe ọ pụtara ị bụ nwaanyị
Vidio, Ụzọ atọ nwaanyị kwesiri idozi ahụ ya
Vidio, Lee ihe niile ikwesiri ịma maka akpụ ori nwa
ADORATION MINISTRY ENUGU NIGERIA (AMEN): Ihe mere Rev Fr Ejike Mbaka ji mechie 'Adoration Ministry' ruo otu ọnwa
Dandruff, Scalp psoriasis, Ringworm na ihe ndị ọzọ na-eri ntutu gị
Emelitere ikpeazụ na: 4 Julaị 2020
Dare Adeboye burial: Etu akwamozu Dare Adeboye si aga
Ikpe Nnamdi Kanu agaghị n'ihu taa n'Abuja
Emelitere ikpeazụ na: 27 Jenụwarị 2021
Ebe ụmụakwụkwọ abụọ mahadum Babcock siri 'daa iwu'
Emelitere ikpeazụ na: 21 Nọvemba 2019
Ndị ọrụ nchekwa egbuola ndị 'unknown gunmen' asatọ chọrọ iwakpo ogige ha n'Orlu